ढोकामा रुँ”दै भागरथीकी आमा भन्छिन्, ‘म कसको अनुहार हेरेर भित्र जाऊँ’ – Nepali Taja Khabar
ढोकामा रुँ”दै भागरथीकी आमा भन्छिन्, ‘म कसको अनुहार हेरेर भित्र जाऊँ’
घरको ढोका बन्द थियो। आँगनमा भने चहलपहल थियो। आँगनको एक छेउमा सेतो पहिरनमा थिइन्, द्रोपती भट्ट। त्यहाँ भेला भएका मानिसबीच द्रोपती भ”क्का”निँदै भनिरहेकी थिइन्, ‘तई झट्ट घर आ भण्या, मुई कईका मुख हेरिबरे भीतर झाउँ ?’ अर्थात् ‘तँ छिटो घर आइज, म कसको अनुहार हेरेर भित्र जाऊँ ?’ द्रोपतीलाई छोरी भागरथी आउने आशा अझै थियो कि !
घरभित्र रहेका भागरथीका सामान आफन्तको माथिल्लो घरमा सारिएका छन्। ‘भित्र जाने, उसको लुगा समातेर रुने, उसको पर्समा फोटो हेरेर क रा उने, उसको काइँयो र प्रयोग गर्ने सामान भेट्यो कि रो इहाल्ने भएकाले सामान सारिएको छ’, भागरथीका काका शिवराज भट्टले भने।
माघ २१ गते बिहान द्रोपतीलाई घरधन्दामा सघाएकी भागरथी अब कहिल्यै न फर्किने भएकी छन्। ब ला त्कारपछि ह त्या गरिएको अवस्थामा भागरथी मृ त भेटिएकी थिइन्। उनको शव माघ २३ गतेदेखि जिल्ला अस्पताल बैतडीको शवगृहमा राखिएको छ।
मधुमेहबाट पीडित उनका बुवा ५० वर्षीय कृष्णानन्द भट्टको पुस ७ गते धनगढीको सारथि अस्पतालमा नि धन भएको थियो। स्थानीय संस्कारअनुसार द्रोपतीले १३ दिन पतिको कि रिया गरिन्। उनले सेतो लुगा पहिरिएकी छन्। त्यो दिन बिहान गोठपात (वस्तुभाउको गोठको काम) गर्दा गर्दै ढिलो भयो।
‘विद्यालय जानुअघि खाना बनाउँथेँ। तर, त्यो दिन ढिलो भयो भनेर बासी रोटी खाएर स्कुल गई। एक चुल्ठी बाटिरहेकी थिई। मलाई मम्मी अर्को तँ बाँटी दे भनी, हतार भएकाले होला, सधैँ दुई चुल्ठी बाटेर मात्र हो स्कुल जाने’ भ क्का निँदै द्रोपतीले भनिन्, ‘मेरी छोरीको हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ।’
भागरथी शारीरिक रूपमा सुन्दर थिइन्। पढाइमा उस्तै अब्बल। माघ २१ गते ८ बजेतिर घरबाट हिँडेकी भागरथीको बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ स्थित लवलेक सामुदायिक व नमा ह त्या भएको थियो। पो स्ट मार्टम रिपोर्टले उनको ब ला त्का रपछि घाँ टी नि मो ठेर ह त्या भएको देखाएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘बहिनी मभन्दा पढ्नमा पनि अब्बल थिई। उसले पढ्छु भनेपछि म भारत हिँडेँ’, केशवले भने, ‘अझ आमाको पनि उत्तिकै ख्याल राख्थ्यो। त्यसैले किरियामा रहेकी आमालाई भागरथीको जिम्मा छाडेर भारत हिँडेको हुँ।’ उनी बहिनीको घटना थाहा पाएर माघ २४ गते घर फर्किएका हुन्।
उनले, घरमा बुवाको मृ त्यु भइसकेको र आफू पनि भारतमा रहेकाले कुनै पापीले यसको कोही छैन भनेर यस्तो कु कृत्य गरेको हुन सक्ने अनुमान गरे। ‘चिनेजानेका मानिसका लागि मायालु थियो। कसैसँग बिराएर नबोल्ने’, उनले भने, ‘म घरपरिवारको केयर गर्छ भनेर ढुक्क थिएँ। तर, अकल्पनीय घटना भयो।’
भागरथीको ह त्यापछि परिवारलाई सान्त्वना दिन मावलतिरकी बज्यै नारुदेवी चडेपानी आएकी छन्। ‘तेरो अनुहार पटक–पटक सम्झना आइरहेको छ, एकै पटक आइजा’, उनले बिलौना गरिन्। भागरथी ती बज्यैलाई असाध्यै माया गर्थिन्।
चडेपानी गाउँमा अहिले सन्नाटा छ। गाउँभरिका मानिस द्रोपतीलाई भेट्न आइरहन्छन्। अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको त चडेपानीमा बाक्लो आवतजावत छ। ‘ह त्या रा कुनै पनि दल वा गाउँ वा समुदायको भए पनि उम्कनुहुन्न।
हामीले यसमा खबरदारी गरिरहेका छौं’, सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले भने, ‘अकल्पनीय र निन्दनीय घ ट ना भएको छ। अहिले चडेपानी चुप्प छ। त्यो भनेको अनुसन्धानमा सहज होस् भनेर मात्रै हो, १० दिनसम्म पनि ह त्या रा पत्ता लागेको छैन, स्थानीयको धैर्यलाई कसैले कमजोरी नठानोस्।’
दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रसिंह कार्कीले अ परा धी को कुनै जात नहुने भएकाले ढुक्क भएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको बताए। गाउँपालिकाले घ टनामा दुःख व्यक्त गरेको र प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई पीडित परिवारलाई राहतका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
घ ट ना १० दिन पुगे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको ८ दिन भएको छ। प्रहरीले माघ २२ गते रातिदेखि मात्रै अनुसन्धान गरेको हो। तर, अहिलेसम्म प्रहरी अलमलमै देखिन्छ। ज घन्य अ प रा ध भएकाले देशको चासो ह त्या रा पत्ता लाग्यो वा लागेन भन्नेमा छ तर प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी ६ दिनदेखि खोचलेक प्रहरी चौ कीमा बसेका छन्। ‘भागरथीका ह त्या रा पत्ता नल गा उँदासम्म म फर्किन्नँ’, डीआईजी सुवेदीले भने।
सुवेदीले अनुसन्धान धेरै साँघुरिएको दाबी गरे। ‘फराकिलो घेराबाट हामी साँघुरो घेरामा आएका छौं। यो अनुसन्धान हो। हेर्नुस्, यसमा कति दिन भनेर त म भन्न सक्दिनँ तर भागरथीका ह त्या रा पत्ता लाग्छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म केही सकारात्मक संकेत पनि आएका छन्।’
निर्मला पन्त प्र क रणमा अ सफल देखिएको प्रहरी भागरथी घ ट नाका दो षी जसरी पनि पत्ता लगाएर गुमेको विश्वास फर्काउने जोसमा छ। ‘निर्मला घ ट नामा धेरै त्रु टि थिए, त्यो हाम्रा लागि सिकाइ पनि रह्यो, त्यही सि काइबाट हामीले भागरथीको घ टनामा अब्बल अनुसन्धान गरेका छौं।
प्रदेशभरिका अनुसन्धानविज्ञ यस घ ट नामा खटिएका छन्, सीआईबीको प्राविधिक टोली पनि यतै छ। त्यसैले दोषी पत्ता लाग्छ’, डीआईजी सुवेदीले भने।
नेपाल आएका बहराइनका राजकुमार किन फसे विवादमा ?
विवाह गरेको ४ दिनमै के भयो यस्तो ? वेहुलीको मृत्यु, श्रीमानलाई लाग्यो यस्तो आरोप (भिडियो हेर्नुस्)